ဂန္တဝင်အဆိုတော်အဖွဲ့ကြီးတွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ခဲ့တဲ့ တစ်ဖွဲ့တည်းသော Kpop အဖွဲ့ဖြစ်လာတဲ့ BTS | News Bar Myanmar
ဂန္တဝင်အဆိုတော်အဖွဲ့ကြီးတွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ခဲ့တဲ့ တစ်ဖွဲ့တည်းသော Kpop အဖွဲ့ဖြစ်လာတဲ့ BTS
BTS အဖွဲ့လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ နိုင်ငံတကာအထိထိုးဖောက်ရင်း အောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့ Kpop အဖွဲ့ဆိုတာကို ပြေးမြင်မိကြမှာပါ။ ဒီတစ်ခါမှာလည်း Esquire မှာ ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့တဲ့ “The Best Pop Bands of All Time” စာရင်းမှာတော့ BTS အဖွဲ့ဟာ ကမ္ဘာ့နာမည်ကြီးအဆိုတော်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူ ပထမဆုံးသော Kpop အဖွဲ့အဖြစ်ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
January 30 ရက်နေ့တုန်းက လူသိများတဲ့ American magazine ဖြစ်တဲ့ Esquire ဟာ သမိုင်းတစ်လျှောက် အ​ကောင်းဆုံး pop band ၁၀ ဖွဲ့ကို ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Esquire ကတော့ Pop သီချင်းအမျိုးအစားနဲ့ပတ်သက်ပြီး “အရိုးရှင်းဆုံးပြောရရင် pop ဂီတဆိုတာ တကယ်ကို့ကျော်ကြားတဲ့ဂီတအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Pop သီချင်းဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ Hit ဖြစ်အောင်ဖန်တီးသီဆိုနိုင်မှုကိုပဲ အဓိကထားပြီးစဥ်းစားပါတယ်။ Pop စစ်စစ်ဟုတ်လား၊မဟုတ်ဘူးလား? တခြားဂီတတွေနဲ့ရောယှက်ဖန်တီးထားသလားဆိုတာတွေက ကိစ္စမရှိပါဘူး။ စာရင်းဝင်အဖွဲ့ဖြစ်လာဖို့တစ်ခုတည်းသောလိုအပ်ချက်က. စာရင်းပေါင်းများစွာရဲ့ ထိပ်ဆုံးနေရာမှာ ရနေဖို့ပါပဲ” ဆိုပြီး ရေးသားဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။
BTS အဖွဲ့ကတော့ စာရင်းဝင် ၁၀ ဖွဲ့ထဲမှာ တစ်ခုတည်းသော Kpop အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး တခြားဂန္တဝင်အဖွဲ့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ The Beatles, Destiny’s Child, Fleetwood Mac, Queen, Sly and the Family Stone, The Beach Boys, ABBA, The Temptations နဲ့ The Supremes တို့နဲ့အတူ စာရင်းဝင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။
Emma Carey က “ဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာ K-pop ရဲ့ ပျံ့နှံ့လွှမ်းမိုးမှုက ကြီးလာခဲ့ပါတယ်။ BTS အဖွဲ့ဟာဆိုရင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးတွေအထိ Kpop ကို ရင်းနှီးစေခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ကောင်းတစ်ဖွဲ့ဆိုတာကို လက်ခံရပါလိမ့်မယ်။ ထိုအဖွဲ့ရဲ့ အမာခံ fanbase ဖြစ်တဲ့ ARMY တွေကြောင့်လည်း BTS အဖွဲ့ကို လူသိများလာစေခဲ့တဲ့အပြင် နိုင်ငံအများကလူတွေကိုပါဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး Kpop ကို စီးဝင်စေနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
BTS အဖွဲ့ရဲ့ ‘Dynamite‘ နဲ့ ‘Life Goes On‘ သီချင်းတွေကတော့ pop, hip-hop, disco နဲ့ R&B အမျိုးအစားတွေကို ရောယှက်ဖန်တီးထားပြီး နားဆင်တဲ့လူတွေကို ဖမ်းစားထားနိုင်တဲ့သံစဥ်တွေပါ ပါဝင်နေခဲ့တာကြောင့် သီချင်းအမျိုးအစားအလိုက် အကြိုက်ချင်းမတူတဲ့သူတွေကိုတောင် နားဝင်ချိုနိုင်စေခဲ့ပါတယ်” ဆိုပြီး ရေးသားဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာကျော်တောင်ကိုရီးယားအဆိုတော်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ BTS အဖွဲ့ရဲ့ကြိုးစားမှု​တွေနဲ့အတူ အဖွဲ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်တဲ့ ARMY တို့ရဲ့ အကောင်းဆုံးထောက်ခံပံ့ပိုးမှုတွေကြောင့် ကမ္ဘာ့တစ်ဝှမ်းမှာ ဂုဏ်သတင်းမွှေးလျက်ရှိပြီး အောင်မြင်မှုတွေကိုလည်း ဝင့်ကြွားစွာလက်ခံရရှိနေပါတော့တယ်။ ဂန္တဝင်အဆိုတော်အဖွဲ့ကြီးတွေနဲ့အတူ ရင်ဘောင်တန်းပြီး စာရင်းဝင်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ BTS အဖွဲ့အတွက် ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်။
Next Huang Zitao ဟာ Sign Language ကို ဘာအတွက်ကြောင့်သင်ယူခဲ့သလဲ »
Previous « Jackson ရဲ့ဘဝခံစားချက်အစစ်အမှန်တွေပါဝင်နေတဲ့ အသစ်ထွက်လာခဲ့တဲ့သီချင်းသစ် “Alone”